မြ၀တီ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Wednesday, 14 March 2018 19:41	font size decrease font size increase font size
နေပြည်တော်၊ မတ် - ၁၄
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col.Kei TAJIKA တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သံအမတ်ကြီး၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန် ကာလအတွင်း မြန်မာ-ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်လိုက်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးများအပြန် အလှန်လည်ပတ်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းဦးစွာပြောကြားပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့်တပ်မတော်၏ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေမှန်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဂျပန်နိုင်ငံက ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေမှုကိစ္စရပ်များ၊ မူးယစ် ဆေးဝါးပ ပျောက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည့်အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် နှစ်ရပ် အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအပြန်အလှန်အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 442 times	Last modified on Thursday, 15 March 2018 12:42
More in this category: « 50th media LETHWEI FIGHT မြန်မာ- ထိုင်း ရိုးရာလက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည်	ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ မော်ရိုကို နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ »